फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन कसरी चल्यो ? – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Jun 10, 2019
फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये एउटा भरपर्दो तथ्य चाहिँ यस्तो छ ।
के तपाई लाई पानीको कमि त भएको छैन? यस्ता हुन्छन असरहरु